Wax ku barashada Boqortooyada Midowday - Caawinta Visa Student
Kooxda waxay halkan u joogaan inay caawiyaan waxkasta oo aan kari karno, gaar ahaan Ardayda raadineysa hoy iyo sidoo kale tallooyin Jaamacadaha UK.
In ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo u leh arimahan runtii waxaan nahay hal dukaan jooji wax walboo la xiriira Daraasada Boqortooyada Ingiriiska guud ahaan. Ardayda dibedda waxay badiyaa ubaahan Talo iyo Caawinaad meelahaan muhiimka ah, waana sababta aan u sameysanay Websaytkaan Kheyraadka, si aan uga caawino una hago Ardeyda Awoodda u leh helitaanka Jaamacada iyo Ganacsiga ugu wanaagsan ee MBA iyo MSC ee Meheradda, Bangiga iyo inbadan oo intaa ka badan. . Dunida banki, waxaa jira fursado xaddidan marka laga hadlayo helitaanka shahaadooyin la aqoonsan yahay. Sidaa darteed kooxdu waxay dib u eegeen in kabadan 20 koorso waxbarasho oo kaladuwan waxayna heleen Shahaadada Bankiga Chartered Banker MBA ee Bangor University wuxuu ahaa mid ay warshadu laftiisu tixgelin weyn ku leedahay.
In kasta oo aan xoogga saarney dadaalkeenna Koorsooyinka la xiriira ganacsiga, waxaan higsaneynaa inaan soo daabacno hagyo badan oo waxtar leh sida usbuucyada iyo bilaha soconaya, oo aan hubinayno inaan haysanno agab Arday oo dhameystiran.
Si loo gaaro waxbarashada ugufiican, ardayda ka socota adduunka oo idil waxay dooranayaan Boqortooyada Midowday (UK) iyadoo ay jirto meesha ay ka dooran karaan adduunka oo dhan Baro shahaadooyinka horumarsan.
Ujeedada websaydhkeenu waa in ardayda la siiyo talooyinka ugu fiican ee daboolaya Socdaalka, Visa, Guriyeynta iyo arrimaha kale ee la xiriira Ardayda. Ardeydu waa inay bartaan walbahaarka walwalka, iyo sidoo kale inay ogaadaan aasaasida tacliimeed ee ugu wanaagsan iyagoon walwal kale dhicin ka hor inta aysan bilaabin koorsada ku habboon. Eeg qaybta Bogga socdaalka ee UKCISA Wixii macluumaad dheeraad ah.